Kuti “Kufamba muMweya” zvinoreveri?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kuti “Kufamba muMweya” zvinoreveri?
Kuti “Kufamba muMweya” zvinoreveri?
Hatigoni kufamba muMweya kunze kwekuti tichiziva ndangariro dzaKristu.
I VAKORINTE 2:16 Nokuti ndianiko wakaziva murangariro waShe, kuti amudzidzise? Asi isu tinomurangariro waKristu.
Hatigoni kuudza Mwari zvekuita. Hatigoniwo kutonzwisisa kuti Mwari ari kuitei kunze kwekunge ndangariro dzaKristu dzatsanangura zvese kwatiri.
Asi Mwari haangaiti chinhu chinorwisa Bhaibheri reKing James Vhezheni. Ndiro hwaro hwake uye purani yake yekubata kwake.
ISAYA 53:1 Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJEHOVA rwakaratidzwa kuna ani?
Bhaibheri rinotiudza zvinoitwa naMwari – asi Mweya waKristu chete ndiwo unogona kutizivisa kana kutiburitsira zvese pachena.
Saka zvizhinji zvatinodzidza pamusoro peBhaibheri, ndiko kuvawo nyore kwazvo kuti tinzwisise ndangariro dzaMwari.
Zano raMwari panguva yekupedzisira nderekuzivisa zvakavanzika zveMwagwaro kuti isu titevere zvaari kuita.
Chinangwa cheMweya Mutsvene ndechekukudza Jesu, kwete umwewo munhu.
Saka kana muchitevera munhu, muprofita kana pasita, munenge musingafambi muMweya.
Tinofamba muMweya chete kana iwo Mweya uchigona kutitungamirira kuti tinzwisise chokwadi cheMagwaro.
Tinofamba muMweya kana takunzwisisa pachedu kuti Bhaibheri riri kutaura kuti kudii kwatiri.
Kana mune ndangariro dzaKristu munoziva kuti nei Jesu akanyora pasi nemunwe wake kaviri.
Nekuti ndicho chikonzero nei Mweya wakauya, kuti utitungamirire muzvokwadi yose.
Jesu ndiye Shoko. Mweya waMwari unotikwevera kuShoko.
Ndiyani akazvipira kutenda zvakanyorwa muMagwaro chete?
Tinokweverwa kuShoko kana Mweya waMwari watizivisa zvinoreva Magwaro.
DEUTERONOMIO 29:29 "Zvinhu zvakavanzwa ndezvaJEHOVA Mwari wedu; asi zvinhu zvakaratidzwa pachena ndezvedu, isu navana vedu nokusingaperi, kuti tiite mashoko ose omurayiro uyu.
Kutinhira kunomwe, Kuuya kwaShe, Chisimbiso chechinomwe neZita Idzva raJesu hazvina kubvira zvanyorwa muMagwaro, saka zvinoramba zviri zvakavanzika kusvikira zvaitika. NdezvaMwari, hazvisi zvenyu.
Kana muchifunga kuti zvinhu zvisina kunyorwa muMagwaro zvakatoitika, munenge musingafambi muMweya.
Mweya Mutsvene unogona chete kukutungamirirai munzira yeMagwaro akanyorwa amunotenda maari.
Asi Mweya waMwari unotigadzirira nzvimbo kunyangwe tisati tazvarwa.
GENESISI 25:21 Zvino Isaka wakanyengeterera muka­dzi wake kuna JEHOVA, nokuti wakanga asingabereki; JEHOVA akanzwa kunye­ngetera kwake, Rabheka, mukadzi wake, akave nemimba.
Mwari ari kunze kwenguva anoonazvakadarika nezvinotevera zviri mufananidzo mumwechete. Saka anoziva sarudzo dzese dzichaitwa nerudzi rwevanhu. Nekuti anogona kuona zvakavanzika zviri kuseri kwechidzitiro chenguva uye anoziva magumo, anokwanisa kutiudza kuti magumo edu achava akadii.
GENESISI 25:22 Zvino vana vakasu­ndana mukati make, akati, "Kana zvaka­daro, ndakaitirweiko izvozvi?" Akando­bvunza JEHOVA.
23 JEHOVA akati kwaari, "Mune ndudzi mbiri muchizvaro chako, ndudzi mbiri dzichaparadzana, dzichibva mudumbu rako; rumwe rudzi ruchakunda rumwe rudzi nesimba; mukuru achashumira muduku."
VAROMA 9:13 Sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Jakobo ndakamuda, asi Esau ndakamuvenga.
Izvi zvinoita sezvisina kunaka. Esau aive munhu akanaka, asi Isau zvichibva pasarudzo dzake ega akatengesa hudangwe hwake. Mwari aiziva kuti aizoita izvi. Saka Mwari akamuvengera kuzotengesa chimwe chinhu chakakosha kwazvo.
Jakobo aive tsotsi asi aida kwazvo hudangwe.
Mwari aive asina hanya kuti hupenyu hwavo hwaive hwakanaka here kana kuti hwakaipa. Ndicho chaive chinhu chikuru. Mwari aive achitarisa matorero avaiita zvinhu vakatarisana neShoko uye hurongwa hwake.
Hudangwe hwaive hwakakosha.
Zvavaifunga pamusoro peShoko raMwari zvaive zvakakosha kudarika hupenyu hwavo ivo.
Munokwanisa chete kufamba muMweya kana muchigona kutevera nekunzwisisa Magwaro.
Zvatakagadzirirwa zvinongoreva chete kuti Mwari anoziva magumo ezvinhu zvese.
Kana tikadyara mbeu yenyemba, tinenge tichiziva kuti mbeu yatichakohwa yakaita sei, sezvo dziri nyemba dzichaberekwa nemunyemba.
ChiKristu chinosanganisa kubatanidza zvinhu zviviri zvinopikisana, simba rekuzvisarudzira uye zvatakarongerwa naMwari.
Zvinhu zviviri izvi zvinoita sezvinorwisana. Asi hazvidaro.
Simba rekuzvisarudzira rinotsanangura maonero atinoita zvinhu isu vanhu nekuti takasununguka kuita sarudzo. Asi hatizivi kuti ramangwana rakatakura zvipi saka hatizivi zvinozokonzereswa nesarudzo dzedu.
Zvatakagadzirirwa ndiwo maonero aMwari. Anoziva magumo kare, ari kunze kwenguva, saka anoziva zvinokonzereswa nesarudzo dzedu dzinobva pasimba redu rekuita zvatinoda.
Simba rekuzvisarudzira rinotarisa kadziva kaduku kehupenyu hwedu isu chete, nesarudzo dzatinoitira kuzvifadza isu chete, sezvo tisingagoni kuona ramangwana.
Izvi zvinosanganisa rudo rwedu rwekuda kuponeswa nekurarama hupenyu hutsvene, nekuti izvi zvakanangana nekufara kwedu isu. Tinokwanisa kuponeswa kubva kugehena tichituhwina mukadziva kedu kezvido zvedu, asi tinenge tisina chokwadi chekuti tichapunyuka here nguva yeKutambudzika uye kuva takagadzirira kunosangana naShe kumakore. Izvi zvinowanzodaidzwa nevanhu kuti (Repucha) kukwira kudenga mukubwaira kweziso. Hatifi takaita chokwadi chekuti tinokwanisa kuenda kana tikaramba tiri mukadziva kezvido zvedu.
Zvatakagadzirirwa zvinokoshesa Muono Mukuru waMwari.
Mwari akagadzira zano kare munguva yakadarika inova yega nzira yekukunda kurarama munguva inouya apo anoona zvese zvisati zvaitika. Urwu rwizi rukuru rweHupenyu runoyerera kubva pachigaro chake chehushe kuDenga. Dambudziko redu, kana taponeswa, pakutitendera kudaidza Jesu kuti Ishe wedu nderekupinda murwizi urwu matinotongwa neKuda kwaMwari. Nekuti ipapo chete ndipo patinogona kuzomudaidza kuti Ishe wedu. Ishe zvinoreva kuti mutungamiriri wedu Mukuru. Tinenge tava pasi pekutonga kwake zvakazara.
I VAKORINTE 12:3 Saka ndinokuzivisai kuti hakunomunhu unotaura noMweya waMwari, ungati: Jesu ngaatukwe! Vuye, hakunomunhu ungati: Jesu ndiye Ishe, asi noMweya Mutsvene.
Chinhu chikuru chakanaka chatinacho kukoshesa sungano yaMwari. Kuti achatitungamirira muchokwadi chese kana tichizvipira kugamuchira kuti Bhaibheri ndiro Chokwadi Chikuru.
Hatigoni kukunda muhupenyu kana tikakoshesa “zvido zvedu”. Hakuna munhu anogona kusvika pahwaro hunodiwa naMwari.
Saka tinoda zvimwe zvekukoshesa pane “kuzvikoshesa” zvinogara, kana tine moyo wakanaka, zvichiguma nekufunganya, “ndaita chaizvo here? Ndichakunda here?”
“Kuzvikoshesa”, kumutendi chaiye wechokwadi, zvinotizivisa kuti hatina kukosha uye kukwanira. Nei?
Tsvagurudzo inodakadza ichangobva mukuitwa yesainzi inoratidza kuti 43% chete yemunhu yakaitwa nemasero emunhu. Zvakapoteredza matumbu edu kana maguru, uye zvakazara kunze kweganda redu, zvinhu zvizhinji zvakaita sehutachiwana, nefangasi nezvimwe zvakadaro zvakawanda kudarika masero emunhu mumiviri yedu. Matumbu anoyanana nepfungwa dzemunhu netsinga dzinodaidzwa kuti vagusi dzinofambisa zvinhu nekukasika pakati pematumbu nepfungwa. Hutachiwana uhu hunokwanisa kukurudzira mafungiro edu hwokonzeresa kufunganya. Kwenguva refu vanhu vaive neruzivo rwemanzwiro emukati mavo anowanzorwisana nendangariro dziri mupfungwa dzavo. Zvinoita sekuti chava chinhu chikuru chakazivikanwa manje manje chesainzi.
Mumanzwiro, kudarika hafu yezviri munhu haagoni kuitonga, uye hutachiwana uhu hunogovana hukama hwakadzama kwazvo nenjere dzedu dzevanhu. Kufunganya nekushungurudzika zvinoita sezvinoyanana kwazvo nemanzwiro emukati nehutachiwana uhu.
Saka sevanhu, kana tikanyanya kuzvikoshesa, hatifi takanaka zvinotikwanira nekuti kudarika hafu yemunhu haasi masero emunhu. Takawanda hutachiwana kudarika humunhu huri matiri. Hazvishamisi kuti nei tisingagutsikane nezvatiri.
Pauro aive munhu akazadzwa neMweya, asi tarisai kuti akatsanangura sei muviri wake wakazadzwa nehutachiwana.
VAROMA 7:24 Ndiri munhu uri pakutambudzika! Ndianiko uchandisunungura pamuviri worufu urwu?
Kana muchida kutambudzika nekufunganya, rambai muchifunga nezvenyu zvakadzama. Kudarika hafu yezvamunoona hutachiwana fangasi nezvimwe zvakadaro. Izvi hazvizoiti kuti chero munhu anzwe zvakanaka nezvake.
Munhu akaponeswa haagoni kuvimba nemabasa akanaka, nekuti chero vahedeni nevasingatendi vanorarama zvakanaka uye vanoita mabasa akanaka.
Saka munhu akaponeswa angapei Mwari?
Munhu akaponeswa anokwanisa chete kupa chido chekuzvininipisa nekutenda munaKristu Jesu, zvisinei nekutadza kwedu, rudo rwechokwadi rwekuda Jesu nekutendeuka kana tamutadzira, uye kutenda kwakasimba kwekutenda muBhaibheri reKing James Vhezheni, uye kuzvipira kutevera zvinotaurwa neBhaibheri nepese patinogona napo.
Kana Jesu atidaidza, zvatinogona kuita kuedza kumuterera nekuita zvaanoda.
Nyaya huru ndeyekuti tinofanira kuda kuita zvinhu nenzira yake.
Tinokundikana, asi ndicho chikonzero nei akadeura Ropa rake. Zvivi zvedu nekutadza kwedu zvinosukwa kasingaperi mutsime reHupenyu iri.
Kuda kutevera Magwaro ndicho chinhu chinofanira kutikurudzira kwazvo.
Ndiwo mafambiro atinoita muMweya. Anotitungamirira munzira yeShoko rake.
Hazvisi zvinhu zvinoonekwa zvinotariswa, kana kuti tabudirira sei pane zvatinoita.
MaKristu mazhinji anobudirira anotevera Jesu nekuti zvinovapa mbiri kana kubudirira. Hachisi chikonzero chakanaka. Ndihwo hwaro hweEvangeri rekubudirira – tendai mugozviwanira pfuma. Tarirai kukosha kwekuzvikoshesa ipapo.
Jobo aive akazvipira kutevera Mwari kunyange akarasikirwa nezvese, kusanganisira hupenyu hwake. Uyu muenzaniso unokurudzira kwazvo.
JOBO 13:15 Kunyange akandiuraya hake, ndichamumirira hangu; Kunyange zvakadaro ndichazvidavirira hangu pamberi pake pamusoro pomufambiro wangu
Chinangwa chemukati memoyo chekuda kutevera Mwari chinoverengwa, kunyange tisina kuva nebudiriro huru mukuita izvozvo izvozvi.
Kunyange tikakundikana, kunyange tikatadza, tinofanira kuramba tichida kumutevera.
Nzira huru yekuita izvi iri paviri:
Chekutanga, kufa kuzvido zvedu kuitira kuti tisaburitse zvibereko zvemanzwiro edu nemafungiro edu uye kusaziva pamusoro penyaya inenge iripo. Tinofanira kuita zvese zvatinogona kuti tive vanhu pasina. Tinofanira kuziva kuti hatirevi chinhu.
Chechipiri, basa redu nderekuratidzira Shoko raMwari.
Jesu Shoko, ndiye ega akakosha. Saka Jesu, muzvirevo zvemazuva ano zvemakomputa nemanhamba, ndiye 1.
Makomputa anoita zvinhu zvawo zvese nemanhamba 1 na 0.
Hakuna munhu anoziva zvakakwana kuti ave 1. Jesu ega ndiye anogona kuita izvozvo.
Tinofanira kuzviona sevanhu pasina. Handifaniri kukoshesa zvinondiitira ini. Ndinofanira kuda kuita kuda kwake.
Saka chinokwanisa kuitwa nevanhu kupa kuda kwavo kuna Jesu, vosiya kuita kuda kwavo, nekuti vanoda kuita saizvozvo.
Munhu akafa kuzvido zvake anozviona semunhu pasina, anova mufananidzo wakanakisa weShoko raMwari.
Zvese zvatinotaura ndizvo zvakataurwa neBhaibheri.
Hatinongedzeri vanhu kune mumwe munhu, asi kuna Jesu chete.
Munhu mumwe nemumwe anofanira mukoshesa hukama neruwadzano rwake naJesu, sezvaanoziviswa muBhaibheri.
Kukanganisa kunoitwa nemaKristu ndekwekuti vanoponeswa nekuwadzana kwavo naMwari, nekukasika vanobva vashanduka voita ruwadzano nekereke. Vanobva vatenderana nezvitendero uye zvinotarisirwa kuti vaite nevanhu vemukereke vobva vatevera tsika dzemukuru wekereke. Saka vanenge vava maKristu asina maturo, vasisavimbi nezvinotaurwa neBhaibheri chete. Vanotanga kutya kupikisana nemukuru wekereke paanoraasika achibva pamagwaro. Vanhu vanenge vava vaendi vekukereke, vachirwira kereke yavo, pachinzvimbo chekuva maKristu vanoratidzira mavhesi eBhaibheri chete.
Kurwira kereke nhasi hakuna maturo sezvo kwane masangano anodarika 45000 emakereke akasiyana pasi rese. Mukana wekuti chero kereke ive yakanaka iri chaiyo mumwechete kubva pamikana 45000. mukana muduku kwazvo. Kuwedzera kuipa kwazvo, Jesu akatsanangura kereke yeRaodikia sebofu, uye iye akamira kunze kwemukova wekereke.
Saka nzvimbo yakanaka yatingasangane naJesu kunze kwekereke.
Ndicho chikamu chezvinosanganiswa mukufamba neMweya.
Chinhu chekutanga kana chaunacho chaungape kunaMwari sechipo ndiko kuda kwako.
Kuponeswa kwakarurama sezvo kusingasanganisiri ruzivo rwakadzama rweMagwaro. Tinofanira kungotendeuka tokumbira Jesu kuti auye muhupenyu hwedu.
Kugamuchira Mweya Mutsvene kwakaoma kutsanangura sezvo kuchiitika nenzira dzakasiyana kuvanhu vakasiyana.
Ngatitarisei kuti Mwari anoshanda sei muhupenyu hwemunhu.
JOHANE 7:39 Asi izvi wakareva zvoMweya, waizopiwa avo vaitenda kwaari, nokuti Mweya Mutsvene wakanga asati wavapo, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa.
Mvura inopa hupenyu panyika. Mweya Mutsvene unopa hupenyu hunoshamisa hwemweya.
"Tendai mandiri", Zvinotaura pamusoro pemifungo inenge iri mundangariro kana mweya inoberekwa nekutenda kuri mumoyo memunhu. Mifungo iyi inofanira ichibva paMagwaro. Kutenda kunobva paMagwaro kunokurudzira maitiro edu kana mabasa edu.
Mweya wemukati kana kuti moyo munda unodiridzirwa neMweya Mutsvene. Mbeu Shoko raMwari rinodyarwa mumunda wemweya wemukati kana moyo wemunhu. Mbeu yeShoko inokudza kutenda kunodiwa kuti kutonge mweya kana ndangariro. Mifungo yepfungwa inotonga muviri.
Pfungwa nemweya zvinoshandiswa zvichiyananiswa kana pachinzvimbo chechimwe muMagwaro. Saka zvinoreva chinhu chimwechete.
VAROMA 8:27 Uyo unonzera moyo, ndiye unoziva kufunga kwoMweya, nokuti unonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari.
VAEFESO. 4:23 Muvandudzwe mumweya wokurangarira kwenyu,
I VAKORINTE 15:38 Asi Mwari unoipa muviri paanoda napo, nembeu imwe neimwe muviri wayo.
Kana Mweya Mutsvene wauya muhupenyu hwedu, unobva watanga kuita kuti muviri uzvininipise. Hatizovimbi nekuzvibata kwedu, kunogona kukundikana. Tinovimba nechinhu chekuti Mweya Mutsvene unoshandura nzira yatinofunga nayo, wotiita kuti titerere kuda kwaMwari.
VAROMA 8:10 ... asi mweya mupenyu nokuda kwokururama.
I SAMUERI 25:29 Kunyange munhu akasimuka kukudzingirirai, nokutsvaka kukuurayai, mweya washe wangu ucharamba wakasungirwa pachisote chavapenyu vari kuna JEHOVA Mwari wenyu,
Mweya wemunhu wemukati kana kuti moyo wakaputirwa mumweya wehupenyu.
Mumoyo kana mweya wemukati ndimo munokura Shoko raMwari seMbeu. Mumoyo ndimo munosimbiswa kutenda kwedu muShoko.
I VATESARONIKA 5: 23 Mwari worugare amene ngaakuitei vatsvene kwazvo; Mweya wenyu, nomoyo, nomuviri, zvichengetwe kwazvo, zvisina zvazvingapomerwa pakuvuya kwaShe wedu Jesu Kristu.
Aya ndiwo mashandiro azvo. Mweya ndiwo mvura inodururwa mumunda wemweya wemukati kana kuti moyo umo Mbeu yeShoko raMwari inodyarwa. Mbeu yeShoko inokura yonatsa ndangariro dzedu kana mweya wedu zvinozogonesa kuunza muviri kunozvininipisa kuShoko raMwari.
Patinoberekwa tinenge tine mweya wemukati kana moyo, asi pasina mweya waMwari unoshamisa mumweya wedu wehupenyu. Pane yatingati hvakiyumi kare inenge yakatogadzirira kukwezva zvinhu zvakaipa asi zvinhu izvi zvinokundikana kuunza kugutsikana kwenguva refu.
Kusagutsikana kwenguva refu uku kunoita kuti vanhu vave vatadzi kana vasingatendi. Kana kuti tinova vanhu vanotsvaga zvinhu zverutivi rwakaipa, kana kuti mufaro wenyika.
Asi kune vamwe, kusagutsikana mune zvemunyika uku kunovaita kuti vatendeuke kubva kuzvivi zvavo vogamuchira Ishe Jesu semuponesi wavo.
Kana izvi zvaitika, Mwari anoisa chikamu chiduku cheMweya wake Mutsvene muvhakiyumu imomo yakapoteredza mweya wemukati kana kuti moyo.
Pakarepo, hunhu hwedu hwevanhu hwekare kana mweya hunotanga kusviba mumaziso medu. Zvinhu zvataimbofarira zvinenge zvisisina kunaka kwatiri.
Mvura yeMweya Mutsvene inodiridzira mweya wemukati kana kuti moyo wakafanana nemunda, uye Mbeu yeShoko inobva yatanga kukura pakarepo. Tinoona kuti tinokwanisa kutenda kuBhaibheri uye tine rudo rwekudzidza zvakawanda pamusoro peMagwaro. Tinowira murudo naJesu apo tinenge tane ruwadzano naye pachake.
Mweya wemunhu unokwira kudenga kuchigaro cheKutonga chaMwari paanofa nekuti mweya wake wemukati kana kuti moyo, unodaira pamusoro pezvivi, wakaputirwa mumweya wehupenyu. Mweya wemhuka hauna mweya wemukati kana kuti moyo mauri saka hauna chaunofanira kudavira kuna Mwari, sezvo usingagoni kutadza.
EZEKIERI 18:4 ... mweya unotadza, uchafa.
MAPISAREMA 49:8 (Nokuti rudzikunuro rwemweya yawo runokosha, Runofanira kuregwa nokusingaperi;)
Rudzikinuro rwemweya rwakatengwa paCalvari, kamwechete.
JOHANE 19:30 Zvino Jesu wakati agamuchira vhinega, akati: Zvapera! Akakotamisa musoro wake, akabudisa Mweya wake
Zvaive zvapera. Ruponeso rwaive rwatengwa naJesu.
Hapana chasara chekuti tiite kunze kwekutenda.
Hamugoni kuponeswa nhasi. Ruponeso rwenyu rwakatengwa kare makore 2000 akadarika paCalvari.
Chamunogona kuita chete nhasi, kana maifunga kuti makaponeswa, kuona nekuziva zvakaitwa kare naMwari.
Jesu ane Mweya waMwari usina mupimo.
Kwatiri tese, mupimo muduku weMweya Mutsvene unouya matiri pakuponeswa, saka sechero chinhu chinomera, chinofanira kukura.
EZEKIERI 11:19 Ndichavapa moyo mumwe, nokuisa mweya mutsva mukati menyu; ndichabvisa moyo webwe munyama yavo, ndokuvapa moyo wenyama;
Mweya waMwari uyu unotigonesa kutevera Shoko raMwari.
EZEKIERI 36:27 "Uye ndichaisa Mweya wangu mukati menyu, nokukufambisai nemitemo yangu; muchachengeta zvandakarayira nokuzviita
Tinofamba muMweya sezvo uchititungamirira kuti tifambe nezvakanyorwa muShoko.
Patinodzidza Magwaro akawanda tofamba padyo zvakanyanya nenzira yaMwari, Mweya wake unotitungamirira wokura matiri kuti uzivise Magwaro ataive tisati taona.
Kukura kweMweya matiri kunodaidzwa kuti “kukura munyasha”.
II PETRO 3:18 Asi kurai panyasha napakuziva Ishe wedu, Muponesi Jesu Kristu. Ngaave nokubwinya zvino, nokusingeperi. Ameni.
I PETRO 2:2 Savacheche vachangoberekwa, pangai mukaka womweya, usina kushatiswa, kuti mukure nawo, mugoponeswa;
Mweya Mutsvene unotanga kutinatsa hupenyu hwedu torarama hupenyu hutsvene.
Mugove weMweya Mutsvene uri matiri unenge wakura saka hunhu hwemunhu wakare hunotanga kudupuka hwoita basa duku kwazvo muhupenyu hwedu.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndipo patinotendera Jesu kutora nekutonga hupenyu hwedu nenzira yake. Anenge ava Ishe wedu patinomuterera nekuterera Magwaro.
Uku hakusi kutevera murairo watinonzwa tichitomanikidzirwa kutevera.
Uku kuzvininipisa nekuzviwisira kuna Mwari patinoda kumuterera nekuita zvinhu nenzira yake.
Tinopa Jesu simba rekutonga hupenyu hwedu zvichibva pakuda kwedu.
VAEFESO 3:1 Nemhaka iyi, ini Pauro, ndiri musungwa waKristu Jesu nokuda kwenyu, imi vahedheni,
Musungwa haana chekutaura pamusoro pehupenyu hwake.
Asi nekuti tiri vanhu, hunhu hwedu hwekare kana kuti mweya wevanhu haufi zvachose uye unenge uchitsvaga mukana wekumuka zvakare wotonga hupenyu hwedu zvakare.
Kana izvi zvaitika, tinoita setinodzokera shure.
Kudzokera shure kunoderedza kukura kweMweya Mutsvene uri matiri, sezvo tine simba rekuzvisarudzira uye tinogona kufuratira mweya kana tikasarudza kudaro.
Zvakare, tinofanira kutendeuka topazve hupenyu hwedu kunaJesu Kristu.
Zvino Mweya Mutsvene unobva wakura wosimba zvido zvedu zvodzikira zvakare.
Mweya Mutsvene unokudzwa neShoko.
Kana tikatsiva Magwaro nezvakabatwa paitaura vanhu, tinodzokera kumashure pamweya topinda muchinzvimbo chekusaziva Magwaro.
Bvunzai chero munhu anonda kukereke kuti atsigire Dzidziso yake neMagwaro chete. Munozoshamiswa nekunzwa kuti zvishoma kwazvo zvavanoziva paBhaibheri.
Chinhu chikuru ndechekuti, kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, Mweya Mutsvene ndiwo unenge uchishanda muhupenyu hwemunhu. Pakutanga Mweya unofanira kuita kuti munhu iyeye atendeuke. Zvino Mweya Mutsvene unenge uri mumunhu iyeye unobva wavatungamirira wonatsa hupenyu hwavo. Izvi zvinogonesa Kuti Mweya wakakura ugare mavari, kusvikira Mweya Mutsvene wagona kutonga hupenyu hwavo zvakazara. Ipapo vanenge vakukwanisa kutenda Bhaibheri, kana vachida havo. Vamwe vanongogutsikana nekugara vachitenda dzidziso dzekereke dzavo.
Izvi ndizvo zvatinodaidza kuti rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Fungai nezvemuviri wenyu seduta vanhu kana kombi yakati kurei.
Munotyaira muchitenderera muchitakura vanhu vakasiyana siyana vane hunhu husingagamuchiriki. Zvino rimwe remazuva munobva maona Jesu parutivi penzira, momira momutakura. Urwo runene ruri ruponeso. Jesu anenge ava mumotokari yenyu. Kana mukafa, Mweya wake unokutakurai kuenda nemi kudenga. Zvino vanhu vese vasingagamuchiriki vaya vanopera rudo nemi, votanga kuburuka mumotokari yenyu. Uhu ndihwo hutsvene. Kristu anenge achinatsa hupenyu hwenyu. Munopedzisira maona kuti hazvina musoro kuti munge muchityaira imi Kristu ari parutivi, zvino munobva mapa mudhiraivho kuna Jesu. Urwu ndirwo rubapatidzo rweMweya Mutsvene apo Jesu anotanga kutyaira ndiye muchovha wako. Anobva atanga kutyaira achikuendesa kwese kwaanoda iye kuti muende.
Zvino tinobva tasvika pachikamu chakaoma.
Jesu ari kuda kuti tiite sei kana atora hupenyu hwedu kuti atonge?
Saka ichi ndicho chikamu chatinofanira kuva takatarisira tese kuti tisvike pachiri, kubva pakutanga.
Mweya wake Mutsvene haudi kutuhwina mukadziva kaduku kematope kezvido zvedu.
Izvi zvinotideredza kuti tive pachinzvimbo chekuti, “Ndiri kuda”, “Ndinoda”, “Ndinofanira kuva neichi”, Ndapota ndipeiwo”.
Anoda kuti tive tiri muRwizi rweHupenyu rweKuda kwaMwari.
Kuti agone kuita izvi Mwari anoda kuti tishandure zvatinokoshesa zvakazara.
Pachinzvimbo chekuzvitarisa, tichinzwa tiri vanhu pasina, iye anoda kuti titarisane nezano rake guru rakanangana nehupenyu hwedu.
Saka tinobva tatarisana nesungano yaMwari kuzuva redu.
Tinofanira kusiya kuteverana nezvatinoda kuti tikunde nekurarama muhupenyu hunofadza. Izvozvi tinenge tosarudza kutevera zviri kuedza kuzadziswa naMwari pazuva ranhasi. Kana tikakoshesa hushe hwake, Rwizi rwake rwehupenyu rwusingawonekwe runoyerera munyika yedu yakaoma yemazuva ano, zvino anowedzera kwatiri zvinhu zvese zvatinoda kuti tirarame.
Kazhinji tinoedza kuita zvaanoda kana tikaita saizvozvo, ipapo anotichengetedza neimwe nzira.
Pano tine chakavanzika chikuru.
Zvinhu zvinokuteverai zvinouya kubva shure kwenyu. Zvinoreva kuti hamuzvioni zvichiuya. Maive musina kubvira makazvitarisira. Asi Mwari anenge agara achiziva kuti munozvida. Saka kana mukabvisa pfungwa dzenyu pazvinhu zvehupenyu hwenyu nezvamunoda, Mwari anopindira okupai zvose zvamunoda.
Kana mukange musingamhanyisani nekutsvaga zvamunoda imi pane mukana wakanaka wekuti mutsvage hushe hwaMwari. Mwari anoda kuti muite zvinhu zvamusingawanzoiti nekuda kwemoyo yenyu.
Kana mukatendera Mwari kukufungirai garai makatarisira kusangana nezvinhu zvisingatarisiriki.
Munofanira kusiya Mwari ashandure mafungiro enyu kana muchida kuva nechekuita muhurongwa hwake munyika yezuva redu ranhasi, sepanguva yechigaro chekutonga chaPirato, vanhu vose vakamuramba.
Mwari aive Mweya unoshamisa muTestamente Yekare.
Mwari paakagara munaKristu, ipapo humunhu huri muMweya Mutsvene hwakaratidzwa. Mwari aive ari zvese Munhu uye Mweya unoshamisa.
Saka Mweya Mutsvene paunotanga kuuya mamuri pakuponeswa unouya nezvese hunhu hwemunhu uye hweMweya unoshamisa. Kutenda muMweya unoshamisa kunokutenderai kutenda uye kuvaka ruzivo rweShoko. Panguva imwechete unounza mumoyo menyu mweya wemunhu wakakodzera waive wagara wakatarisirwa naMwari kuti muve nawo. Mune mamwe mashoko Mweya Mutsvene unokuitai kuti muve munhu mutsva anodiwa naMwari kuti muve.
Panozova nekurwisana kusina magumo pakati pehunhu hwemunhu anonamata hunenge huri mamuri uye hunhu hwenyu hwekare hwakazara zvivi kana mweya wemunhu.
Apo munhu mutsva mamuri anodya kudya kweMagwaro anokura osimba.
Kana mukadya zvepachivhiti-vhiti, zvepamasoshari medhiya, zvemafaro, dzidziso dzakaitwa nevanhu, chirwere chekusagona kugara musina mbozhanhare hunhu hwenyu hwekare hunosimba.
Sembwa mbiri mukurwa, imbwa yamunopa zvekudya zvakanyanya ndiyo inokunda.
Jesu haasi kutsvaga magamba ekutenda matiri nhasi.
Ari kutsvaga vanhu vanoda kunzwisisa Magwaro vorarama neBhaibheri reKing James vhezheni.
Saka chinangwa cherubapatidzo rweMweya Mutsvene mumazuva ekupedzisira ndechei?
Mwari ari kuda kuti mbeu yekupedzisira inokohwewa ive yakafanana nembeu yepakutanga yakadyarwa munguva yekereke yekutanga.
Nguva yekereke yekupedzsira inofanira kudzoserwa kudzidziso dzekereke yekutanga.
Mwari ari kuda kutitungamirira kuti tidzokereke pachokwadi cheMagwaro chakadzidziswa nemapostora kukereke yekutanga.
Saka chiri kudiwa naMwari kwatiri nhasi kuti tizive chokwadi chakanyorwa muBhaibheri kuti tifanane nekereke yekutanga.
Mwari anoda kuti tizive chokwadi cheMagwaro. Kuti tigone kuverenga Bhaibheri tichirinzwisisa. Hakuna nguva yekereke, mumashure mekupera kwekereke yekutanga nguva dzakapoteredza 170 AD, yakabvira yakwanisa kunzwisisa zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga.
Rudo rwaMwari kunguva ino yekupedzisira rwuri pakuita maKristu anogona kutenda zvakafanana nezvakatendwa nemapostora.
Ngatitarisei chigaro chaMwari chehushe kudenga.
ZVAKAZARURWA 4:6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga panegungwa rakavonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakanga panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
7 Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakafanana neshumba, chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakafanana nemhuru, chisikwa chipenyu chechitatu chakanga chinechiso chakaita sechomunhu, nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakafanana negondo rinobururuka.
Chisikwa chipenyu chechina uye chekupedzisira pazvisikwa zvipenyu zvakapoteredza chigaro chaMwari chehushe igondo. Gondo rinoona zvinodakadza. Rinogona kuona zvinhu zviduku duku zvinogona kutadza kuonekwa nezvimwe zvinhu zvese zvinorarama.
II VATESARONIKA 1:3 Tinofanira kuvonga Mwari nguva dzose pamusoro penyu, hama dzangu, se zvazvakafanira, nokuti kutenda kwenyu kunokura kwazvo, norudo rwenyu mose, mumwe nomumwe kunavamwe, runowanda;
Patinofamba muMweya mumapeji eBhaibheri, kutenda kwedu kunokura.
Mwari anoda kuti munzwisise zvakavanzika zvese zviri muBhaibheri rake zvakatadzikwa kuonekwa nevamwe vanhu vese nezvavanosiirira vachiti hazvina kukosha.
Jesu akapa vanhu 9000 zvekudya, akaisa kukosha pahuwandu hwemafufu akasaririra pavakadya. Nei?
Chingwa mucherechedzo wedzidziso. MaJuda aya aizoramba Evangeri paCalvari.
Evangeri rakarambwa iri raizonyorwa muTestamente Itsva nevadzidzi vaJesu ropiwa kuvaHedeni mukati menguva nomwe dzemakereke.
Ipapo, mukati menguva yeKutambudzika, maJuda 144000 anobva mumarudzi gumi nemaviri aIsraeri, aizogamuchira Evangeri rakarambwa nemaJuda.
Zviverengo zvematengu emafufu echikafu zvaive gumi nemaviri uye manomwe. Nguva nomwe dzemakereke, uye marudzi gumi nemaviri aIsraeri.
Mapoka maviri aizoponeswa naMwari munguva dzeEvangeri.
MuTabernakeri maive mechigadziko chemwenje minomwe uye zvingwa gumi nezviviri zvekuratidzira.
Zvakare gumi nezviviri uye zvinomwe.
Musoro wenyu wakabatanidzwa nemuviri nemabhonzo emusana.
Mabhonzo manomwe epamusoro evhetebhura anoita mutsipa. Mamwe mabhonzo gumi nemaviri evhetebhura anobata mbabvu dzenyu.
Jesu ndiye Musoro wekereke --- kwete pasita kana mufundisi.
Anobatana nemuviri wake kupfurikidza nguva nomwe dzemakereke uye marudzi gumi nemaviri evaIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru.
Saka mafufu akasaririra mucherechedzo wechirevo chikuru chakadzama.
Mwari ari kushanda nevakarambwa pakupedzisira. Vaya vasingakwani mumakereke vari kunze kwawo nekuda kwekutenda kwavo.
Kufamba muMweya kunoreva kuti kukwana muhurongwa hwaMwari panguva yekupedzisira.
Asi munguva yeRaodikia akamira kunze kwemukova wemakereke ese.
Tarirai. Haisi kereke iri muRaodikia.
ZVAKAZARURWA 2:1 Nyorera mutumwa wekereke iri paEfeso, uti:
Nguva yekereke yekutanga yaive yeEfeso. Nguva yekereke iyi yaive nehunhu hwakafanana nehweguta reEfeso. Yaifanira kuva muenzaniso kunguva dzese dzaizotevera. Kurudziro yayo yaifanira kupararira ichidzoka kunosvika pakupera kwenguva dzemakereke yova hwaro hunoteverwa nekereke yekupedzisira yeRaodikia. Nekudaro yaive isiri muEfeso. Yaive isiri yeEfeso.
Zvino kunguva shanu dzekereke dzaitevera aitaura pamusoro pekereke dzaive dzine hunhu sehwemaguta. Dzaive nekukanganisa kwadzo kwenguva yadzo imwe neimwe kwaive kwakasiyana nedzimwe nguva dzese.
ZVAKAZARURWA 2:8 Nyorera mutumwa wekereke iri paSmirna, uti:
Kereke iyi yaive paSymirna. MaKristu akauraiwa zvakanyanya nehushe hweRoma. Vakakanganisa kupfurikidza kubata kereke semabatirwo aiitwa hushe hweRoma nevabati vahwo. Kukanganisa uku kwaive munguva iyi.
Saka iyi yaive kereke paSmyrma, inodaidzwa nhasi uno kuti Izmir.
ronda nhorondo kunosuwisa asi kunodakadza. MaKristu ekutanga vaikandirwa mutoronga zvisina kufanira nevabati veRoma pakati pemakore 170 AD na 312 AD mukati menguva yekereke yechipiri.
ZVAKAZARURWA 2:10 Tarira, Dhiabhorosi woda kuisa vamwe venyu mutorongo, kuti muidzwe;
Musi wa 7 Gumiguru 2016. Pasita Andrew Brunson vakasungwa muIzmir vakazoendeswa kujeri guru vasina kubvira vaedzwa pamberi pematare edzimhosva. (tichinyora izvi pakati pegore 2018).
Hondo imwechete “yemaKristu achirwisana naDiaborosi” ichiri kuenderera mberi.
Jesu wakati kereke paFiradefia.
ZVAKAZARURWA 3:7 Nyorera mutumwa wekereke iri paFiradherfia, uti:
Kunze kweEfeso, mamwe makereke ese ari pamaguta ane hunhu hwakafanana nawo anoenderana nenguva dzawo. Nguva imwe neimwe ine matambudziko ayo asina kusangana nedzimwe nguva.
Saka mamwe matambudziko, nekubudirira, anongosangana nenguva imwechete.
Asi tarisai kusiyana kwakaita Raodikia. Raodikia zvinoreva kuti “kodzero dzevanhu”.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia, uti: Zvanzi naAmeni, chapupu chakatendeka, chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari;
Iyi ikereke iri paRaodikia, iri kereke yeveRaodikia [tasiya Chirungu chiripo kuitira kunzwisisa pamusoro pekereke yeveRaodikia zvisina kuisa musiyano muchiShona]. Nemamwe mazwi, vanhu veRaodikia vaive vaita kereke yavo.
Vaitenda zvakasimba mukodzero dzavo zvekuti vakazviitira nzira yekunamata nayo mumakereke.
Kune masangano emakereke anodarika 45000 mugore ra2018. Tisingatauri mamwe mapoka akasiyana siyana eMharidzo. Uye kune marudzi emaBhaibheri akaturikirwa anodarika zana eBhaibheri reChirungu. Zvinhu zvasvika pakuipa kwakazara.
Tiri kufanira kudzokera kuBhuku raMabasa nekukereke yeTestamente Itsva.
Asi makereke edu akazara dzidziso dzakaitwa nevanhu dzisingabvi muMagwaro-- fungai pamusoro peTiriniti, Kisimusi, 25 Zvita, masangano, pasita musoro wekereke, zvakabatwa paitaura vanhu zvichitsiva Magwaro nezvimwe zvakadaro.
Saka Jesu ari kutidaidza kuti tibude muzviitiko zvemakereke edu anhasi.
Kubvumirana “nekufunga kweboka rechichechichechi” chemazuva ano, tinotenda zvinotaurwa nevamwe vanhu sezvo tisina zvakawanda zvatinoziva pamusoro peMagwaro uye tisingazivi zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro penyaya dzatinenge takatarisana nadzo. Tinotevedzera pasita wedu pachinzvimbo chaJesu, mukuita izvozvo tinova vaendi vekukereke zvavo-wo. Tinodzokorora zvinotaurwa napasita pachinzvimbo chekudzokorora zvakanyorwa muBhaibheri.
Saka tinenge tichitenda zvatinoda kutenda mazviri.
Tinoterera zvatinoda kunzwa.
Ndidzo kodzero dzedu. Ndiwo mafungiro edu.
Izwi raMwari ndiro Shoko rake.
Anoonekwa kumunhu akazvimiririra, kwete kuboka.
Mwari anoda kuti nhaurirano dzedu naye dzibve pane zvakanyorwa muMagwaro.
Kufamba muMweya zvinoreva kuti kugona kunzwa izwi remukati reMweya Mutsvene.
ZVAKAZARURWA 18:1 Shure kwaizvozvi ndakavona mumwe mutumwa achiburuka kudenga, anesimba guru; nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake.
2 Akadanidzira nenzwi guru, achiti: Rawa, Rawa, Bhabhironi, guru, yava nzvimbo inogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nhare yeshiri dzose dzinetsvina dzinovengwa.
Mutumwa mukuru kana kuti nhume akatiyambira pamusoro pekuipa kuri mumakereke edu. Babironi mucherechedzo wekereke yeRoma yakabereka vanasikana vakawanda makereke akabuda mairi nevanoti vanopikisana nedzidziso yayo. Kereke yeRoma yakasimudzira munhu kuti ave musoro wekereke. Vakabuda mairi vakangotora muenzaniso wayo vakasimudzira pasita kuti ave musoro wekereke. Uyu mufananidzo wechikara. Kutevedzera zvinoitwa neRoma.
ZVAKAZARURWA 17:1 Zvino mumwe wavatumwa vanomwe, vakanga vanendiro nomwe, akavuya akataura neni, achiti: Vuya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru, inogara pamsoro pemvura zhinji;
Izvi zvakaipa kwazvo. ChiRoman Catholic chakatsanangurwa semhombwe.
Izvi zvakaipisisa. Vemasangano akabuda mairi nevanoipikisa vakaberekwa muRoma. Asi pachinzvimbo chekugara vakachena vakatevedzera mai vavo. Zvino Roma yakutsanangurwa samai vemhombwe. Saka zvinoreva kuti vanasikana vayo vemasangano akabuda mairi vangoriwo mhombwe.
ZVAKAZARURWA 18:4 Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga, richiti: Budai mariri, vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro.
Kana muchifamba muMweya muchanzwa izwi remukati rinorwisana nedzidziso dzemakereke edu anhasi dzisimo muMagwaro.
Iri harisi izwi remutumwa, sezvo iri riri izwi riri mukati reMweya rinotiyambira pamusoro pehuwori hwese uye zvitendero zvakaitwa nevanhu munguva ino yekupedzisira umo Shoko, Jesu, anorambwa kubva mukereke yake.
Saka kana muchida kusangana naJesu, munogona chete kuita izvi kunze kwekereke.
Kuzviratidza kwaShe kwekupedzisira kuri kumunhu mumwe nemumwe mukereke, kwete kereke yese.
Tarirai, haatauri pamusoro peboka guru.
Anoda kuti tiungane pamwechete. Asi anoti aripo pamapoka maduku.
Nhasi kuungana uku kwevanhu kunogona kuitika paintaneti.
Anoramba achikoshesa vashoma. Dambudziko pano nderekuti vashoma kwazvo vanowana chokwadi.
MATEO 20:16 Saizvozvo vokupedzisira vachava, vokutanga novokutanga vachava vokupedzisira: nokuti vazhinji vakadanwa, asi vashoma vachasarudzwa.
Pakupedzisira anoda kereke yekupedzisira kuti itende zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga, kuti parege kuva nemusiyano pakati pevekutanga nevekupedzisira.
Vazhinji vakadanwa pakudzoserwa uku nemuprofita wenguva yekupedzisira. Asi vateveri vemuprofita wenguva yekupedzisira vakapatsanurana kuita mapoka mazhinji zvichienderana nekuti vanoturikira sei zvavakabata pakutaura kwake. Saka “mapoka eMharidzo” haachisiri paMagwaro zvakazara pakutenda kwawo. Saka vanhu vashoma kwazvo vachasarudzwa sezvo vashoma kwazvo vakazvipira kutevera Magwaro zvakazara pasina chimwe.
ISAYA 1:9 Dai JEHOVA wehondo asina kutisiyira vakasara vashomashoma, tingadai takafanana neSodoma, takaita seGomora.
Zvichienderana nekodzero dzevanhu dzezvekusangana pabonde, apo gumi remitemo nedzidziso yekusikwa kwezvese zviri kurambidzwa mune dzimwe nzvimbo .
RUKA 17:26 Sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoa, ndizvo zvazvichaita vo namazuva oMwanakomana womunhu;
Vanhu vasere chete ndivo vakaponeswa kubva pasi rese. Iyi iyambiro huru kwatiri.
Mufananidzo wevasikana gumi une mbiri kwazvo.
II VAKORINTE 11:2 Nokuti ndinegodo pamusoro penyu negodo raMwari; nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kunaKristu semhandara yakachena.
Musikana kana kuti mhandara mukadzi kakachena, mucherechedzo wemaKristu akaponeswa.
MaKristu ese akaponeswa akamirira kuuya kwaShe. MuKristu mumwe nemumwe ane mwenje unovhenekera maonero ake ezvaanofungira kuti ichokwadi.
Asi chiedza hachina kukwana. Chiedza chinofanira kuratidzira zvimwe zvinhu kuti chionekwe.
Chinhu chatiri kutaura nezvacho pano iBhaibheri.
Saka maKristu ese achasangana nekuedzwa kwekupedzisira.
Mune Chiedza chakakwana here kuti muverenge nekunzwisisa Vhezheni reKing James Bhaibheri rakanyorwa?
MATEO 25:2 Vashanu vavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera
Izvi zvinobva zvapatsanura maKristu kuita mapoka maviri.
Boka rekutanga ndivo vanhu vaya vanotenda kuti Bhaibheri ndiro chokwadi chakazara Chikuru, uye vanogona kuverenga nekurinzwisisa pachavo. Vasingagari vachingoti “bvunzai pasita wangu” panoburitswa pachena kusaziva kwavo.
Zvino boka repiri ndidzo dzimwe ndudzi dzese dzevanhu vanoenda kukereke vanemafungiro akasiyana siyana. Nehumbwende vanotenda kuti kereke yavanoenda ndiyo chaiyo kubva pamakereke anodarika 45000 anotenda zvakasiyana siyana. Aya ndiwo anonzi mafungiro ekushuva zvawo.
MATEO 25:3 Nokuti mapenzi akatora mwenje yawo, akasatora mafuta.
MaKristu mapenzi haagoni kunzwisisa zvizhinji zveMagwaro. Vanofara kutenda kuti pane zvakakanganiswa muBhaibheri, nhema, kuzvirwisa pacharo, uye mavhesi asina kufanira anofuratirwa achinzi haana kukosha. Vanobva vawedzera pfungwa dzavo netsananguro dzesainzi (dzinova fungidziro pamusoro pezvinhu zvisingaonekwe) zvakaita seBig bang uye shanduko yemhuka dzichiita vanhu. Havangogoni kuisa kutenda kwavo paBhaibheri reKing James vhezheni. Vanosarudza kusarudza kubva pamavhezheni anodarika zana eBhaibheri rechirungu. Apo vanofanira kunonga nekusarudza pakati pemakereke anodarika 45000 akasiyana siyana kuti vawane chokwadi chavo. Vari kungofamba mumhute yechiKristu yakasviba kwazvo. Kugarawo mukereke Svondo yega yega kunova nheyo dzeruponeso rwavo.
Nei vasina mafuta?
Vaingova vaendi vekukereke. Havana kubvira vazvifungira vega. Vaitevera mutungamiriri, pasita, aive asinawo chiedza. Ndicho chikonzero nei vaive nemufaro wekushaiwa ruzivo rweBhaibheri. Hakuna aitarisira kuti vazive zvakawanda. Vaingopfeka nguvo yekuzviviga imwechete yaingopfekwa nemunhu wese mukereke mavo. Vaive vasina rudo rwekuziva Magwaro. Vaive vekereke, kwete vaJesu Kristu. Vaitenderana nezvitendero zvekereke vachitsvaga kutsigirwa nekereke. Vaifuratira maKristu anotevera Magwaro vachiti vanopenga varambei pedyo nemi.
MATEO 25:4 Asi vakanga vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo.
Mafuta mucherechedzo weMweya Mutsvene. Asi mafuta anofanira kutsva opa chiedza. Kuva nemafuta kutambisa nguva kana asina kutungidzwa. Kana mukatakura mwenje wakatungidzwa, zvinoreva kuti munogona kuzvionera. Hamusi kuvimba nemunhu. Mweya Mutsvene unofanira kuva mamuri kuti ukupei zaruriro iyi. Saka vakachenjera vanonzvera Bhaibheri kuti vazarure zvakavanzika uye kuti vazive zviri kuitika. Ndizvo zvazvinoreva kana muchifamba muMweya.
Saka humbowo hwekuva nemafuta kana Mweya Mutsvene ndehwekuti mune Chiedza chakakwana here kuti muverenge nekunzwisisa Bhaibheri. Kana mukatarisa pamavhesi eBhaibheri mofunga kuti anorwisana, kana kuti pane zvakakanganiswa muBhaibheri, munege musina Mweya Mutsvene.
Humbowo hwehuvepo hweMweya Mutsvene ndiro simba rekutenda Shoko rimwe nerimwe riri muBhaibheri nekuona chokwadi nechirevo chakadzama kana zvikatsanangurwa kwamuri. Mweya Mutsvene unokupai simba rekupokana nekereke kana isiri kutevera Magwaro.
Kana mukagona kuona nekuziva chokwadi cheBhaibheri chakadzama chiri mumavhesi anorambwa nekufuratirwa nemakereke nekuti havamanzwisisi, munenge mune chiedza chakakwana chemukati kuti chivhenekere muMagwaro. Chiedza ichi chonogona chete kuuya kubva mumafuta emukati eMweya Mutsvene unenge uchikutungamirirai muzvokwadi yose.
Ndihwo hunhu hwemunhu anenge achifamba muMweya.
Haatsvagi kubvumirwa kana kugamuchirwa neboka rekereke. Anenge asina kupfeka chivhara-chiso chinenge chakatarisirwa kuti apfeke nekereke.
Iri ndiro Gwaro rinonyanya kufuratirwa zvakanyanya. MaKristu ese akaponeswa mukereke nhasi akavata akakotsira. Imi (zvisinei nekuzviramba kwamungaite), neni, nevamwe vese. Izwi rekuti “vose” rinoreva kuti muKristu mumwe nemumwe akaponeswa. Hapana akasiiwa.
Ndiyani ari kutiita kuti tese tigare takavata?
Pasita anotiparidzira vhiki imwe neimwe.
Vanotivaraidza kusvikira takotsira nemharidzo yavo inotiita kuti “tinzwe kudekara zvakanaka” pamusoro perudo rwaMwari.
Vanokanganisa zvakaprofitwa nekuzviisa munguva yeKutambudzika kukuru. Saka ndiyane angade kuziva nezvazvo? Mwenga waKristu haasi kuzova ari munguva yeKutambudzika.
Kana kuti vanoisa zviitiko zvenguva inouya munguva yakadarika.
Kukotsira zvinoreva kuti munyika yedu yatakadekara mairi hatisi kuziva zviri kuitika.
MaKristu akataura kuti Trump aive munhu akaipa aisazofa akakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2016. munzvimbo dzese dzaizoita sarudzo zvairatidza kuti aizokundwa. Asi akakunda. Nekuti Mwari ndiye ari kutonga, uye ane chinangwa naTrump.
Saka Mwari ari kutiyambira, tarisirai zvisingatarisiriki. Nguva dziri kushanduka.
Mapasita iwayo aiti Trump aizokundwa vakangoratidza pachena kuti havazivi kuti Mwari anofunga sei.
MATEO 25:6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere, tarirai chikomba chovuya, budai mundomuchingamidzai!
Asi kuri kuuya kumutswa kunoshamisa kukuru. Kuchamutsa muKristu wese akaponeswa. Chinhu chakadaro hachina kubvira chaitika munguva yakadarika.
Kutinhira kunomwe kwakarira pakarepo, kwakavanzika uye kusina kutarisirwa.
63-0320 CHISIMBISO CHECHITATU.
Zvino, chikonzero chiiko nhasi cherumutsiridzo rwatinofanira kuva narwo ... tine kumutswa kwemasangano; hatisati tawana kusanganiswa chaiko. Kwete, kwete, kwete kwete, kwete, baba. Musafunge kuti takamutswa. Hatisati. Oh, vane mamiriyoni nemamiriyoni nemamiriyoni enhengo dzekereke, asi hapana rumutsiridzo havana. Kwete kwete.
Mwenga haasati amutswa. Mazviona? Hakuna kuitika rumuko ikoko, hakusati kwaita kuzviratidza kwaMwari kuti asanganise Mwenga. Mazviona? Takakutarisira. Kuchatora iko Kutinhira kunomwe kuti kumutse mwenga. Achakutumira. Akavimbisa kudaro. Zvino, zvino, tarirai. Zvino, mwenga aive afa.
Mafungiro eHama Branham pamusoro pemapoka eMharidzo: ndeekuti akafa.
Anoda kwazvo kumutswa.
MATEO 25:7 Zvino vasikana vose vakamuka, vakagadzira mwenje yavo.
Kugadzira mwenje zvinoreva kurarama hupenyu hutsvene. Kubvisa zvipomerwa zvese (zviratidzo zvezvivi) zvezvakaipa.
Tinoita izvozvo chete kana tichitya chaizvo. Tinobva tabvisa zvese zvisina maturo zvinowodza hupenyu hwedu.
Chimwe chinhu chinoitika nekukasika, pakarepo, chinotyisa chichaitika pasi rese.
Zvino kunobva kwauya kutinhira kunomwe kwakavanzika kusina kana kunyorwa zvachose. Ndizvo chaizvo. Uye ndinotenda kuti kupfurikidza Kutinhira kunomwe uku kuchaziviswa mumazuva ekupedzisira kuti Mwenga agadzirirwe ave nekutenda kwekukwira kudenga; nekuti nezvatiri nhasi uno hatizokwanisi kuita izvozvo. Tine chimwe chinhu chinotiita kuti tienderere mberi; hatitorina kutenda kwakakwana kuti tiponeswe neMweya unoshamisa. Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana kuti tishandurwe pakarepo totorwa kukwira kuDenga kubva pano panyika, uye tinozoona kuti mumashure mechinguvana, Ishe achida, tsvagai pazvakanyorwa.
Tinogona chete kukwira kudenga kana tava mumiviri mitsva.
Iyi ndiyo nhanho yaMwari yekupedzisira yekutsaura vanotenda kuBhaibheri vechokwadi. Kutinhira kunomwe kusina kunyorwa kunofanira neimwe nzira kurondwa muBhaibheri kuti kutizivise kuti miviri yedu ingashandurwa sei.
Asi kubva pakumuka kusvika pakukwira kudenga kwaJesu paive nemazuva makumi mana chete. Saka mumazuva makumi mana, tinofanira kugona kuturikira makwara akavanzwa muBhaibheri.
Vafundisi vemapoka emharidzo havagoni kuturikira Bhaibheri zvakanaka kuti vazive kuti Trump aizokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2016. uye izwi rekuti “Trump” (hwamanda) rakanyorwa kaviri muBhaibheri segwara. Vakarasiswa nekuturikira kwavo kwenhema kwavanoita mazwi akabatwa panotaura vanhu. Saka itariro ipi yavanayo kuti vanzwisise Kutinhira kusina kunyorwa?
Kuzviipisa kwacho vanotenda kuti Kutinhira kwakareva manzwi ako kare – hama Branham havana kubvira vataura izvozvo. Saka havasi kutarisira kutinhira munguva inouya saka vacharamba Kutinhira pakuchareva manzwi ako.
Saka nguva yeKutambudzika kukuru ndipo panoperera mutambo kumapenzi emakereke eMharidzo anotorwa kubva pamazwi akabatwa paitaura vanhu, akavabvisa paBhaibheri.
Vanoenda kumakereke vakasukurudzwa pfungwa zvakanyanya nedzidziso dzisimo muMagwaro zvekuti havazofi vakagona kurasa pfungwa dzavanadzo mumisoro yavo. Tichiwedzera, havana kutojaira kuzvifungira vega.
Saka muzviitiko zvakaoma uye zvisina kutarisirwa zvichauya neKutinhira kunomwe, avo vega vanogona kufunga zviri kunze kwedzidziso dzemakereke ndivo vachagona kuzvifungira, kuti Mweya Mutsvene ugone kuvatungamirira munzira yakavanzwa inonovasvitsa kumuviri mutsva.
MATEO 25:8 Mapenzi akati kunavakachenjera, tipeiwo mamwe mafuta enyu nokuti mwenje yedu yodzima.
Zvinhu zvese zvichave zvakasiyana kwazvo nezvinofungirwa nemaKristu anoenda kumakereke, zvekuti vachazopedzisira vaona kuti havana kana gwara rekuti Bhaibheri rinonyatsorevei. Vakafuratira vatungamiri vavo, nekuti vari kukumbira vasikana vakachenjera rubatsiro. Mapasita emakereke anenge ari pakuipirwa. Vachirambwa nevanhu vavo, vanenge vatanga kuona kuti dzidziso dzemakereke dzakaitwa nevanhu inhema dzega.
MATEO 25:9 Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete zvimwe haangakwaniri isu nemi tose, endai henyu kunavanotengesa muzvitengere.
"Muzvitengere": Pane muripo unoda kuripwa.
Munofanira kuva makagadzirira kumira kunze kwekereke kuti mudzidze kubva kuna Jesu neShoko rake. Asi vakachenjera vane ruvheneko rweMweya Mutsvene kuti vaverenge nekunzwisisa zvakavanzika zveMagwaro zvakadzama. Izvi zvaive zvakadaro nekuti vaive vasiri vaendi vekukereke vaitamba mutambo “waforo mai ridha” ndotevera mutungamiri wangu kumashure, pasita wekereke.
Kuti muve chikamu cheMwenga waKristu munofanira kugona kuzvifungira uye kuva nerudo rwekurarama neMagwaro zvakazara. Munofanira kuda Bhaibheri zvakanyanya zvekuti munoridzidza zvakanyanya. Bhaibheri ibhuku guru rinoda kuverengwa zvakanyanya. Rine zvidimbu zvakasiyana siyana zvakawanda zvinotora nguva kuti tizvinzwisise. Hakuna nzira inokasika uye iri nyore yekuti munhu abudirire.
Zvino kutinhira kunomwe kunobva kwareva.
Iyi inguva yekutadza kuziva zvinege zvichiitika zvakanaka. Kumutswa kwevakafa. Kudengenyeka kwenyika.
52 Mabwiro akazaruka nemitumbu mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa.
Pakaita mazuva makumi mana kubva pakumuka kwaJesu kubva kuvakafa kusvika pakukwira kwake kudenga. Inguva duku.
Munguva duku yekukanganisika iyi, hazvizogoni kuti muronde Kutinhira kunomwe kwakavanzika kuti muzviwanire miviri mitsva, uyezve kuedza kudzidzisa vanhu vanoenda kumakereke vakasukurudzwa pfungwa kuti vonzwisisa sei Bhaibheri ravanoziva zvishoma kwazvo pamusoro paro.
Zvakare ichave nguva inotyisa kwazvo. Kukanganisa kumwechete munobva mapinda munguva yeKutambudzika kukuru. Kutinhira kunomwe kuchadya nguva yedu zvakazara. Vaya vanonyatsoda Bhaibheri ndivo vachatsvaga vakawana nekuziva Kutinhira kunomwe pachiri nenguva yekuti vazive kuti kunoti kudii.
Vasikana vakapusa mapenzi vakaedza kwazvo kutevera Magwaro. Asi zvaikonzereswa nekutya kusiiwa. Vaida makereke avo nemapasita avo kudarika Ishe. Vaive vasinganyatsodi Bhaibheri. Vaimhura kwazvo Mwenga aiedza kutevera Magwaro pane zvese zvaaiita. Saka Mwari haavadi pakati peMwenga wake. Vachazongopindawo havo Denga nekuti vakaponeswa. Asi kwete zvino. Vanofanira kutanga vapinda munguva yeKutambudzika vouraiwa.
Nekuti vakaramba kufamba muMweya.
Mweya unotitungamirira kuti tifambe muchiedza cheShoko raMwari totevera Magwaro pazvese zvatinoita kana kutaura.
“Ishe, Ishe”. Tarisai kurudziro yeTiriniti. Vanoda kudzidziswa zvakare.
Vachawana dzidziso kubva pakuparidza kwaMosesi naEria munguva yeKutambudzika.
ZVAKAZARURWA 15:3 Vakaimba rwiyo rwaMosesi, muranda waMwari, norwiyo rweGwaiana, vachiti: Ishe, Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura, anoshamisa; Mambo wamarudzi, nzira dzenyu dzakarurama, ndedzazvokwadi, Imwi Ishe wavatsvene.
Vari kutaura kuti Gwaiana ndiro Ishe Mwari waMasimba ose
Gwaiana ndiro Rega Mutsvene.
ZVAKAZARURWA 15:4 Ndianiko ungarega kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti imi moga muri mutsvene;
Saka hapana Tiriniti nekuti hakuna mumwe mutsvene.
Kana Baba naMweya Mutsvene vari Vanhu vakasiyana, zvino havagoni kuva vatsvene kana tichitarisa zvichibva pavhesi iri. Asi Mweya Mutsvene mutsvene. Saka haagoni kuva Munhu akasiyana naJesu. Jesu ndiye Mweya Mutsvene naBaba, sezvo ari ndiye Ishe Mwari waMasimba ose.
Saka kufamba muMweya kunoreva kuti kuziva chokwadi pamusoro pekuzara kwovuMwari.
Mweya unotitungamirira muzvokwadi yose.
MATEO 25:12 Akapindura akati zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handikuziviyi imi.
“Kuziva” kunotaura pamusoro peruwadzano rwepedyo – rwakafanana nerwemurume nemukadzi wake. Vanoenda kukereke vane ruwadzano rwavo rwepedyo nekereke yavo napasita wavo. Bhaibheri raive risiri Mukuru wavo, sezvo vaitenda zvinhu zvakasiyana siyana uye vaifara kufunga kuti mune zvakakanganiswa muBhaibheri. Izvi zvinoreva kuti vaifunga kuti maive nezvakakanganisika muna Jesu, nekuti Ndiye Bhaibheri. Saka kubva pamiromo yavo vaimuda pakutaura kwavo, asi kubva mumoyo yavo vaive neruwadzano rwepedyo nemakereke avo nemapasita avo. Zvino vaive vakunoripira muripo wavo munguva yeKutambudzika.
Jesu ari kuuya ari mumuviri wemunhu, sezvaakanga ari paakakwira kuDenga. Hatizivi kuti ari kudzoka rini seMwanakomana wemunhu. Asi achadzoka.
Tinofanira kuva takamumirira.
Ngatitarisei pamufananidzo wekupedzisira uchatiratidza zvakare kuti kufamba muMweya kwakasiyana zvakazara nezvatinotarisira nepfungwa dzedu sevanhu.
Izvi mucherechedzo wechirayiro chemuchato neGwaiana.
RUKA 14:17 Akatuma muranda wake nenguva yokurayira kuti avudze vakanga vakakokerwa, kuti: Vuyai, nokuti zvose zvagadzirwa zvino.
Mwari akatumira mutumwa kunguva yekupedzisira kuti akokere vanhu kuchirayiro chemuchato neGwaiana. Mwari anotarisira kuti vauye nenzira yeMagwaro. Saka Mwari anozivisa zvakavanzika zveMagwaro panguva yekupedzisira kuti vanhu vazive kuti vorarama sei neMagwaro. Kukokwa kuchava kwemaKristu akaponeswa chete, kwete vasina kuponeswa.
Asi maKristu ese akaponeswa vakamedzwa kwazvo netsika dzemakereke dzisimo muMagwaro, zvekuti havagoni kuterera kumutumwa wenguva yekupedzisira anovaudza kuti vatevere nekurarama zvinotaurwa neMagwaro chete sezvakaitwa nekereke yekutanga yeTestamente Itsva. Saka maKristu akaponeswa vanoramba kudzokera kuMagwaro.
RUKA 14:18 Ipapo vose vakatanga nomoyo mumwe kuzvirevera. Wokutanga akati kwaari: Ndatenga munda, ndinofanira kumbondouvona; ndinokumbira kuti undireverere
Mumwe anoshanda mumunda masikati. Izvi hazvigoni kutadzisa munhu kunodya chirayiro husiku. Izvi mucherechedzo wekuti vanoenda kukereke vari kunze kwekuda kwaMwari netsika dzavo dzisimo muMagwaro. Saka vanodya chidyo magwanani asi vachichidaidza kuti chirairo chaShe chekupedzisira, pachinzvimbo chechisvusvuro chaShe chemangwanani.
Vanosimba pakuita Kisimusi mutambo mukuru kwazvo pagore, kunyangwe Bhaibheri risina kubvira rati tipemberere kuzvarwa kwaShe. Izwi rekuti “Kisimusi” uye zuva ra 25 Zvita hazvina kunyorwa muBhaibheri. Vazivi vakapinda mumba vakaona Mwana. Saka havana kubvira vanopa mwana zvipo muchidyiro. Jeremia Chitsauko 10 rinotiudza kuti tisashongedze muti nesirveri nendarama sezvinoitwa nemapegani. Asi vanoenda kumakereke vanofarira kwazvo miti yeKisimusi.
JEREMIA 10:2 Zvanzi naJEHOVA, "Regai kudzidza tsika dzamarudzi avanhu, musavhunduswa nezviratidzo zvokudenga; nokuti marudzi avanhu anovhunduswa nazvo.
3 Nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo; nokuti mumwe unotema muti mudondo, riri basa ramaoko omunhu unoveza nedemo
4 Vanoushongedza nesirveri nendarama, vanourovera nembambo nenyundo, kuti urege kuzununguka.
Vanoenda kukereke vanobapatidza muzita raBaba, Mwanakomana, naMweya Mutsvene asi havagoni kutaura kuti Zita racho nderekuti kudii. Saka vanotenda muTiriniti isimo muMagwaro, Mwari asimo muMagwaro waMwari- mumwe- muVanhu vatatu, uye Munhu wechipiri muhuMwari asina kutaurwa nezvake muMagwaro.
Mukuita izvi vanoramba zvakanyorwa muBhaibheri, rubapatidzo muZita raJesu Kristu.
Kuramba Magwaro nekutaura kuti pane zvakakanganiswa zvichakumhurai muchipinda munguva yeKutambudzika kukuru.
Nguva yenzombe ndipo kereke payakarasa Shoko raMwari. Izvi zvakatangira pakanzuru yeNicaea muna 325 AD pakaziviswa Tiriniti. Vakaramba vachishandura Shoko raMwari, rinova Chiedza. Chinhu chakatevera vakanga vanaPope achitonga. Vanhu vatatu havagoni kuita zita rimwechete, saka Mwari wemaKristu akarasikirwa neZita rake. Rakatsiviwa nemazita ezvinzvimbo. Asi kusvika nhasi vanotevera Tiriniti havagoni kutaura kuti Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekuti kudii. Mukatambisa chiedza chinodzima. Saka nyika yakabva yapinda muNguva yeRima.
Nzombe dzamajoko mashanu dzinomiririra vasikana vashanu mapenzi vasingazivi magwaro akakwana kuti vanzwisise Kutinhira Kunomwe kunotungamirira Mwenga kuti agamuchire muviri mutsva.
Vanoramba vachiturikira Kutinhira kunomwe kusina kunyorwa muzvikamu zvezvinhu zvinomwe zvakanyorwa muBhaibheri. Izvi hazvifambirane.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Munhu uyu anoda kwazvo kereke yake zvekuti haana basa nemutambo wemuchato neGwaiana. Haana chipingaidzo chaakapa. Anogutsikana kuti kereke yake yakanaka. Asi kereke yakamumisa kuenda kuchirairo chemuchato neGwaiana.
Mukati mezviitiko zvakasangana sangana zvezuva rimwe nerimwe dutu rinoparadza rechiprofita rinofamba chinyararire, asi risina anogona kurikurira. Asi riri kunonga vanhu vakasiyana pane vataitarisira, richisiya vanhu vakaponeswa vari mumakereke.
Kana muchifamba muMweya munenge muchifara kuona Mwari achishandisa vanhu vasingatarisirwi kuzadzisa Shoko rake rakanyorwa.
Zvino panguva yekupedzisira Mwari anotanga kudaidza vaya vakarambwa vakaraswa. Vanhu vasingadiwi nemakereke.
Pakupedzisira Mwari achadaidza vakaipa vapari vemhoswa.
Obama aive munhu akanaka anofara, nekuda kweizvi akatya kwazvo kutsamwisa maMosiremu, akatendera Mubatanidzwa wenyika dzepasi rese UN kumhura Israeri mavhiki maviri asati abva pakutonga.
Trump akauya ari munhu akaipa chaiye akagumburisa vanhu vazhinji. Asi zvakatora munhu akaipa kuti ave nezvivindi zvakakwana zvekumisidzana nemaMosiremu. Trump akabva aita Jerusarema guta guru reIsraeri.
Saka pakupedzisira, kufamba muMweya kuitira kuzadzisa Shoko raMwari, kuchauya kuvakaraswa, vakaipa nevapari vemhosva.
Vanhu vatisingabvumi kuti vangashandiswa naMwari.
Vanhu vakanaka imbwende kwazvo havagoni kumisikidzana nekupikisa vavengi veEvangeri. Saka vanokundikana.
Vanhu vakanaka munguva ino yevanoenda kumakereke vanotya kwazvo kurarama nezvinotaurwa neMagwaro zvakazara. Vanotya kwazvo kumisikidzana nevazhinji vanosimbirira pazvitendero zvisimo muMagwaro.
Zvino kunobva kwauya vhesi rinopodza kwazvo muBhaibheri.
Hapana pakati pemaKristu akaponeswa mumakereke achakunda kukwira kudenga.
Saka zviri nani kuva kunze kwekereke.
Ndiko kwatichatorerwa nerwendo rweMweya pakupedzisira.
RUKA 18:8 Ndinoti kwamuri: Uchakurumidza kuvaruramisira. Asi kunyange zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Saka Jesu aive asina chokwadi chekuti vanhu vazhinji vachave vachitevera Magwaro pakupedzisira.
Asi kana muchitenda kuBhaibheri muchinzwisisa Bhaibheri, muchimira nezvamunotenda munofanira kuva muine Mweya Mutsvene unokutungamirirai muchokwadi chese.
Munenge muchifambira muMweya.
Zvisinei nevese vanoenda kukereke vasingatenderane nemi.